Homeसमाचारडा. केसीसँग वार्ताका लागि चौतर्फी दबाब
October 6, 2020 admin समाचार 7719
चिकि’त्सा शिक्षा सुधार’का अभियन्ता वरिष्ठ चि’कित्सक डा. गोविन्द केसीको जीवनर’क्षाका लागि तत्काल वार्ता गर्न सर’कारलाई चौतर्फी दबाब सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, साझा पार्टी तथा नागरिक स’माजका विभिन्न तह र तप्काले वा’र्ताका माध्य’मबाट समस्या समाधान खोज्दै उनको जीन’वरक्षाका लागि पहल थाल्न सर’कारको ध्या’नाकर्षण गराएका छन्।
नेपाल चिकि’त्सक संघले आ’इतबार नै ७२ घप्टे अल्टिमेटम दिँदै डा। केसीको माग तत्का’ल सम्बोधन गर्न सरकारलाई चेतावनी दिइसकेको छ। तोकिएको समय’भित्र माग सम्बोधन नभए जस्तो’सुकै कदम चाल्न संघ तयार रहेको अ’ल्टिमेटममा उल्लेख छ।
भदौ २९ गतेदेखि जुम्ला’बाट अनशन थालेका डा। केसीको माग सुनुवाइ र जीवर’क्षाका लागि सरकारले २२औं दिन बितिसक्दा पनि कुनै चासो देखाएको छैन। चि’कित्सा शि’क्षाका क्षेत्रमा देखिएका बेथिति र सरकारले विग’तका आफूसँग गरेको सम्झौता त’त्काल कार्यान्वयन गर्न माग राख्दै डा। केसीको अनशन थालेका हुन्। सर’कारले बेवास्ता गरेकै कारण उनको ज्यान जोखि’ममा पर्दै गएको छ।
डा. के’सीको उपचारमा संलग्न चिकित्स’कहरूका अनुसार तत्काल अनशन नतोडा’उने हो भने उनको ज्यान जोगाउन कठिन छ। त्रिवि शिक्षण अस्प’तालको शड्ढयामा छट’पटाइरहेको डा. केसीसँगको वार्ता त परको कुरा, अहिले’सम्म उनलाई भेट्न र स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न सरकारका कुनै अधिका’रीले शिक्षण अस्पता’ल जाने हिम्मत गरेका छैनन्।
आफैं’ले गरेको सम्झौता का’र्यान्वयन नगर्दा सरकारले जनविश्वास मात्र गुमाएको छैन, सरकार नै मा’फियाको नि’र्देशनमा चलिरहेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ। नेपाल कम्यु’निस्ट पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुरालाई प्रा’थमितामा राखेर डा।
केसीले अ’नशन थालेको देखिन्छ। तर त्यही पार्टीको सर’कारले आपैंmले गरेको चुनावी प्रतिबद्ध’ताविपरीत डा। केसीले उठाएको अजे’न्डालाई दुत्कारेको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनि’कमा छ । -news24 बाट
March 19, 2021 admin समाचार 5808
December 24, 2020 admin समाचार 4895
June 22, 2021 admin समाचार 4018